Jabuuti oo ka hadashay eedeynta Villa Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Maxamuud Cali Yuusuf oo ah Wasiirka Arrimaha Dibadda Djibout ayaa bartiisa twitter-ka ku daabacay, in dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddii Turkish Airways ee maanta ee Muqdisho u socotay, ay ku noqon doonto Istambul si ay u raacaan duullimaad kale oo Muqdisho u socda.
MOGADISHU, Soomaaliya - Diyaaradda Turkish Airlines oo waday 40 qof oo uu kamid ahaa Taliyihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin ayaa dib loogu celiyay maagalada Istanbul ee dalka Turkiga, halkaas oo markii hore ay diyaaraddu kasoo kicitintay. Inkastoo khilaaf uu ka jiro tirada rasmig ah ee la saarneyd diyaaradda Fahad Yaasiin oo ilo wareedyada qaar tilmaamayaan inay dhammayeen lix qof.
War saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Farmaajo ayaa lagu sheegay in dawlada Jabuuti ay Fahad Yaasiin ku xannibtay garoonka diyaaradaha ee Jabuuti.
Xoghayaha Guud ee xisbiga RPP, ahana Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda ee Djibouti Ilyas Mousa Dawaleh ayaa isna bartiisa twitter-ka kaga jawaabay eedda ka timid madaxtooyada Soomaaliya.
Hay’adaha amniga ayaa Fahad Yaasiin ku eedeeyay inuu Muqdisho ka waday abaabul ciidan iyo inuu khalkhal geliyo ammaanka garoonka diyaaradaha ee Aadan cadde.